Rose of Sharon: ကျေးဇူးတင်လွှာ၃၈
Posted by rose of sharon at 10:27 AM
သစ်သစ် June 22, 2012 at 11:14 AM
မမမွေးနေ့က ဒီနေ့ဆိုတော့ သစ်သစ်နဲ့မွေးနေ့တူတယ် မမ....
rose of sharon June 22, 2012 at 2:18 PM
khin June 23, 2012 at 3:25 AM
sar ma yay tot bu lar...don't do that, u ragood writer.
သစ်သစ် June 27, 2012 at 10:53 AM
စာရေးဖို့မုမလာဘူးဖြစ်နေလို့ပါ ... ဆက်ရေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်နော်
Happy Birthday Ma Ma Sharon.
rose of sharon June 22, 2012 at 2:36 PM
စံပယ်ချို June 22, 2012 at 3:02 PM
မွေးနေ့မှ စပြီး အရာရာပြည့်စုံ
ကျန်းမာခြင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းများလဲ ပြည့်ဝပါစေ
rose of sharon June 22, 2012 at 3:09 PM
Mary Grace June 22, 2012 at 3:45 PM
ကျမကိုချစ်ခဲ့ကြသော ကျမကိုမုန်းခဲ့ကြသော ရည်းစားဟောင်းများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်… :P (သဘောကျလို့..)
Shinlay June 23, 2012 at 1:02 PM
ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းက မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ။ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။
ချော (အစိမ်းရောင်လင်ပြင်) June 23, 2012 at 9:04 PM
ဖယောင်းတိုင်လေး ၃၈ချောင်းမှ သည် အချောင်းပေါင်းများစွာကို မိသားစုနဲ့အတူတူ ထွန်းညှိနိုင်ပါစေ..
ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကို တစ်သက်တာပတ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေနော်.
မိုးငွေ့........ June 25, 2012 at 10:53 AM
ဖဘမှာ wishလုပ်ပြီး ဒီကိုခုမှရောက်ဖြစ်တော့မယ် ...ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့မွေးနေ့လေးမှစပြီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ချစ်တဲ့မိသားစုအနဲ့အတူရှိပါစေ အမ...။
san htun July 7, 2012 at 8:27 AM
ံHappy Birthday Belated မရို့ စ်..မွေးနေ့ မှသည် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ
richelle co July 24, 2012 at 4:10 PM